I-Charmant, Idolobha Elihle laseCovington Loft - I-Airbnb
I-Charmant, Idolobha Elihle laseCovington Loft
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Susan
I-loft enhle yangasese esezingeni eliphezulu esifundeni esinomlando edolobheni laseCovington. Le loft ye-chic elungiswe ngokuphelele isendleleni eya ezindaweni zokudlela ezihamba phambili nezitolo ezinhle kakhulu zase-Covington. Ibhodlela lewayini namakhekhe kunikezwa ukuze uhlale ubusuku bakho bokuqala. Uzothanda izinsiza kanye nokuhlobisa okumangalisayo!
Le loft inikeza ikhishi eliphelele elinesiqandisi sosayizi ogcwele, i-microwave futhi efakwe ngokugcwele izitsha, izibuko zeziphuzo kanye nezitsha. Indawo yokuhlala enkulu enosofa wokulala, izihlalo ezimbili zama-glider/rocker, ideski nomabonakude. Indawo enhle yokuphumula nokuzijabulisa. Kuqashwe i-loft eyodwa kuphela ukuze ube nobumfihlo obuphelele.
4.98 · 109 okushiwo abanye
Indlu lapho i-loft ikhona khona ineminyaka engu-170 ubudala kanti indawo ehlala kuyo isesifundeni esingokomlando saseCovington. Kucebile ngomlando, izihlahla ze-oki ezinhle kanye nobukhazikhazi obutholakala emadolobheni amancane kuphela. Kunezitolo eziningi zekhofi, izindawo zokudlela kanye nezitolo phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Ngizotholakala ukuze ngibingelele izivakashi ekuhlaleni kwazo kobusuku bokuqala. Ibhuku lezivakashi lizotholakala endaweni ephezulu enezindawo eziseduze.